गर्भबाहिरै भ्रूण विकास गर्न सकिने कुरा कति सम्भव? – Health Post Nepal
गर्भबाहिरै भ्रूण विकास गर्न सकिने कुरा कति सम्भव?
२०७८ माघ २२ गते १३:५५
काठमाडौं – चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले आगामी केही वर्षभित्रै गर्भबाहिर भ्रूण विकास हुने दाबी गरेका छन्। यति मात्र होइन, यसको हेरचाह गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) भएको रोबोट हुनेछ।
वैज्ञानिकहरूले कृत्रिम भ्रूणको विकाससँग सम्बन्धित हरेक पक्षलाई एआईबाट सञ्चालित रोबोटद्वारा निगरानी गरिने बताएका छन्। यो अध्ययन जर्नल अफ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा प्रकाशित भएको छ। चीनको शुझाउ इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीका वैज्ञानिकहरूले मुसामा कृत्रिम भ्रूण विकास गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
यति मात्र होइन, एआईबाट चल्ने रोबोटिक मिडवाइफले भ्रूणको विकास हेर्दै भ्रूणको अनुगमन गरिरहेका छन्। आगामी केही वर्षमा यो प्रविधि महिलामा पनि प्रयोग गर्न सकिने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्। यसो गर्दा महिलाहरूले गर्भावस्थामा हुने समस्याबाट छुटकारा पाउनेछन्। यस्तै कृत्रिम भ्रूणमा बच्चा बढेको हेर्न सकिनेछ।
यो प्रविधिले जीवनको विकासलाई बुझ्न मद्दत गरिरहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्। उनीहरुले यसबाट भविष्यमा मानव भ्रूणको विकासलाई अझ नजिकबाट बुझ्न सक्षम हुने बताएका छन्। यसका साथै बच्चाको जन्मका दौरान आउने समस्याबाटसमेत मुक्ति मिल्ने वैज्ञानिकले बताएका छन्। यो प्रयास कति सम्भव हुनेछ भन्ने अनुसन्धान पछिको निष्कर्षले नै देखाउला।